Saaxiibada casriga ah ayaa si joogto ah ugu dhibtoodaya inay soo saaraan noocyo adag oo adag oo adkaysi leh. Si kastaba ha noqotee, tartanka noocaas ah, tayada dhadhanka ah ee noocyo cusub ayaa badanaa la kulma, dhammaan hodanka ah ee dhadhanka caleenta iyo ariga dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee aruuriya rabitaanka cuntada oo fog. Sababtan awgeed, dad badan oo beeralayda khibrad leh ayaa waligood u ahaan doona kuwo daacad u ah noocyada hore, oo la baddalay qarnigii la soo dhaafay.
Kala duwanaanta canabka "Extra"
Dhulka dalkeenna, viticulture for millennia badan ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee dad badan. Qaar ka mid ah, waa hab loo helo lacag, dadka kale waxay u tahay warshad nafta, iyo kuwa kale, waa hobby dhab ah iyo macnaha guud ee nolosha. Waa nooca saddexaad ee dadka badanaa la qabsado geeddi-socodka caleemaha sabiibka ah ee ay bilaabaan inay abuuraan Beelaha Gaarka ah.
Fasal canab "Baikonur"
Maalmihii hore, dad badan ayaa ku hawlan viticulture si ay u soo saaraan ka soo goosashada keentay khamri xoog leh guriga. Gaar ahaan tan, noocyo farsamo ayaa lagu beeray on santuuqa, taas oo siin badan oo casiir loo baahan yahay khamriga mustaqbalka. Maanta, dad badan ayaa ku dadaalaya in ay helaan noocyo canab leh dhadhan fiican iyo soo bandhigid, si ay u helaan raaxo badan oo beruud ah oo qurxin miiska cuntada oo leh naadiyo qurux badan.
Inkasta oo canabkuna uusan ahayn warshad Ruush ah ama Ruush ah, waxa uu noqday mid caan ku ah dhaqankayaga waxana uu noqday qurxinta dhaqameed ee dhismo walba. Intaa waxaa dheer, dad badan oo jecel ee berry qurux badan ma aha oo kaliya koraan, laakiin sidoo kale ku hawlan yihiin beerista noocyo cusub iyo foomamka hybrid. Ilaa hadda, noocyada taranka hiwaayadda waxay ku jiraan qaybo cajiib ah liiska diiwaanka caalamiga ah.
Caleemaha kala duwan "Victor"
Si aad u dhacdo jacayl leh nooc kasta oo sabiib ah uma baahna waqti badan. Mararka qaar waa ku filan kaliya in la eego farqiga quruxda badan, oo dareemaya ariimo-macaan oo miro ah iyo midabka caloosha ayaa si deg deg ah uga jawaabi doona dhammaan cilaaqaadyada leh dareen kacsan. Cuntadani waa caleemaha oo leh magac magac leh "Victor".
Fasal canab "Lily dooxada"
Canabkii ugu fiicnaa waa kuwa soo ifbaxay kan danbe. Ka dib oo dhan, jajabyada casriga ah waxay isku dayayaan in ay sameeyaan dadaal kasta si looga saaro cilladaha badan ee suurtogalka ah iyo hagaajinta noocooda cusub si ay u noqdaan kuwo ku habboon. Tani waxay si gaar ah ugu kalsoon tahay kuwa xardheylaha ah kuwaas oo iyaguna ah taageerayaal weyn oo ka mid ah midhaha dhaqankan iyo in ay sameeyaan xulasho iyaga u gaar ah.
Kala duwanaanta canabka "Valentine"
Inta badan, marka aad iibsanayso canabka suuqa ama dukaanka, ma xitaa u malaynayno inaan si isku mid ah ugu kori karno qorshahaaga. Isla mar ahaantaana, faa'iido weyn oo ka mid ah hiwaayadda, halkii warshad, viticulture waa koritaanka degdeg ah ee duurka, iyo iyaga oo ay kooxo, sababtoo ah baadiyaha sida caadiga ah leeyahay meel ka badan oo loogu talagalay koritaanka iyo daryeel wanaagsan.
Wax kasta oo canab, noocyo kala duwan ama qaababka isku dhafan, tani ma aha wax caddaynaya tayada miraha iyo mudnaanta busha laftiisa. Inta badan, waa qaababka hybrid ee soo jiidata si aad u guulaysato, gaar ahaan beerashada hiwaayadda. Oo waxaa loogu talagalay dadka jecel in sifooyinka farsamo ee midhaha dhaqanka this, laakiin halkii ay ujeedada miiska iyo joogtaynta, door ciyaara door weyn.
Waxyaalaha kala duwan ee beeraha "Talisman"
Noocyada canabka ah ee ay soo saaraan xulashada xirfadlayaasha ee saynisyahannada ayaa muddo dheer noqda mid caadi ah. Noocyada noocan oo kale ah waxay badanaa leeyihiin ma aha oo kaliya tayada cajiibka ah ee miraha, waxay si wanaagsan u miro iyo joogto ah, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin iska caabin fiican. Ka dib oo dhan, waxaa loogu talagalay kuwan kuwa ku shaqeeya iyaga on iyaga. Maqaalkani, waxaan rabnaa in aan idin garanno, akhristeyaasheena, oo leh mid ka mid ah canabahan, kaas oo si ballaaran loo yaqaan labadaba caanaha iyo warshadaha warshadaha.
Kala duwanaanta canabka "Furor"
Taageerada ugu weyn ee canabku marnaba ma joojin doono si ay u ogaadaan wax walba oo ku saabsan noocyada cusub iyo, haddii aad jeclaan lahayd, ku beeraan dhismahaaga. Caadi ahaan, noocyo cusub ayaa leh tiro badan oo ah tayadoodu korodhay, oo aad uga sarreysa dhamaan kuwii hore. Isla mar ahaantaana, maanta, foomamka hybrid oo canab ah soo saaro by growers hiwaayad, kuwaas oo xaqiiqdii wax badan oo ku saabsan dhaqanka this, aad u caan ah.
Kala duwanaanta canabka "Nizina"
Midkeen waliba wuxuu ku biiraa xagaaga waxyaabo kala duwan iyo walxo kala duwan. Qaar ka mid ah, tan waa badda, waayo qof ayaa ah asfaltka magaalooyinka kulul, laakiin qofkani waxa uu yahay caruurnimada tuulada ayeeyo iyo waxyaabo badan oo berry ah oo ka soo jeeda kaynta iyo beeraha khudradda. Laakiin, mid kasta oo ka mid ah saddexdaas doorasho, waxaan dhamaanteen rajeyneynaa dhamaystirka xilli-ciyaareedka kulul ee sanadka oo kaliya si canabku u muuqdo qorraxda muuqata suuqa ama geedka canabka ah ee beerahooda.
"Lady Fingers" kala duwan ee canab
Inkasta oo ay caan ku tahay noocyo cusub oo canab ah iyo foomamka isku dhafan, haddana qaar badan ayaa weli kufilmaamaya dhadhankaagii hore waxayna soo kordhiyeen canab la xaqiijiyay sannadihii la soo dhaafay. Khamriga noocan oo kale ah maaha mid ka cabsanaya dhibaatooyinka daryeelka iyo cudurrada suurtagalka ah ee baadiyaha, tan iyo fursadda si aad u hesho berry aad u dhadhan leh ee dhaqankan waa dhiirigelin weyn iyaga.
Siraha iyo cuntooyinka lagu cuno khamriga "Isabella" guriga dhexdiisa
In winemakers hiwaayadda, mid ka mid ah caleemaha ugu caansan ugu caansan waa Isabella. Laga soo bilaabo waxay soo baxday mid dhexdhexaad ah macaan, tartar yar iyo cabitaan guud oo fiican. Isla mar ahaantaana, dhirta lafteeda waa mid aan qabyo ahayn beerashada oo si fiican u ilaalinaysa nooca dhirta. Laakiin waxaan ka hadli doonaa sida loo sameeyo khamri laga bilaabo canabella "Isabella" guriga dhexdiisa.
Marka laga soo tago habka caadiga ah ee loogu talagalay helitaanka goosashada qani ku ah, mararka qaarkood waxaa jira baahi loo qabo in lagu takooro caawiye macnaheedu waa in ay kor u qaadaan koritaanka khudaarta iyo miraha. Kuwaas waxaa ka mid ah gibberellin. Macluumaadka guud ee Gibberellin waa hormoon koboc ah oo laga soo qaatay fangaska miyirka ee Fusarium.